7 Magaalooyinka ugu Fiican Yurub ee Booqanaya Kuwa Safarka Waaweyn | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 7 Magaalooyinka ugu Fiican Yurub ee Booqanaya Kuwa Safarka Waaweyn
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 06/02/2021)
Yurub waxay leedahay dhaqan aad u hodan ah iyo taariikh, taas oo ka dhigtay meel caan ah oo fasax loogu tago safarrada waaweyn. Madxafyada, beeraha, astaamaha quruxda badan, iyo xulasho balaaran oo makhaayadaha ah. In gaaban, Haddii aad hawlgab tahay waxaa jira habab badan oo cajiib ah oo aad naftaada ugu buuxin karto magaalo kasta oo Yurub ah. Si kastaba ha ahaatee, magaalooyin aad u yar ayaa sahlan in lagu dhex socdo oo laga dhex helo safarradooda waaweyn. Markaad qorsheynaysid fasaxaaga Yurub, Waxa safar kasta oo waayeel ah ay tixgelinayaan waa heerkaaga caafimaad, gelitaanka soo jiidashada waaweyn iyo hawlaha, gaadiidka ugu fiican, Marka lagu daro miisaaniyad iyo muddada fasaxa.
Sidaas, waxaan gacanta ku soo qaadnay dhowr ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan ee lagu booqdo Yurub ee loogu talagay dadka safarka ah. Sidaas, waa lagugu soo dhaweynayaa inaad raacdo socdaalkeenna gudaha 7 magaalooyinka waaweyn ee saaxiibtinimo ee Yurub.
Safarka Tareenka ayaa ah mid aad u haboon isla markaana ah Jaan-saaxiibtinimo Si Loogu Safro. thwaxaa article waa qoran tahay in wax lagu baro oo ku saabsan tareenka Travel by Save A tareenka, Tigidhada Tareenka ee ugu jaban Websaydhka Adduunka.
1. Magaalooyinka ugu Fiican Yurub ee Booqanaya Kuwa Safarka Waaweyn: Rome, Italy
Rome waa magaalo weyn oo soo booqda Yurub oo loogu talagay dadka safarka ah. Magaalada qadiimiga ah ee Rome, inta badan soo jiidashada, hotels, iyo maqaayado gebi ahaanba waa loo heli karaa waayeelka curyaamiinta curyaamiinta ah. Taas macnaheedu waa in waddooyinka magaalada oo dhami ay leeyihiin goleyaal kuraasta curyaamiinta, magaaladuna iyadu waa siman tahay, sidaa darteed iyadoon loo eegin heerkaaga jirdhiska, waxaa kuu fududaan doonta inaad socod ku dhex socoto.
Halka Rome ay aad u buuxsameyso xilli sare, haddii aad safar u baxdo xilli-xilliyeed, deyrta, tusaale ahaan, waxaad ubaahan doontaa inaad Rome lahaato gabi ahaanba naftaada. Intaa waxaa dheer, huteelka iyo qiimaha safarka ayaa u muuqda inay hoos u dhacaan xilli-xilliyeedka, Waxaa intaa dheer, uma baahnid inaad ka walwaleyso in aad kiraysato gaari, maxaa yeelay waxaad si sahlan ugu safri kartaa Rome meel kasto oo aad Yurub joogtaba tareenka. Ma jiraan wax ka habboon oo ka habboon safarka tareenka tareenka Trenitalia ee xawaaraha sare ee casriga ah iyo tareenka horumarsan. Marka lagu daro raaxada iyo adeegga tareenka weyn, Waxaad ku raaxeysan kartaa qiima dhimis gaar ah tikidhada tareenka loogu talagalay waayeelka.
Milan ilaa Rome waxaa qoray Tareenka
Florence ilaa Rome by Tareenka
Pisa ilaa Rome by Tareenka
Naples ilaa Rome waxaa tababaray Tareenka
2. Milan Gudaha Talyaaniga
Duomo iyo Leonardo De Vinci ‘Cashadii ugu dambeysay’ waxay Milan ka dhigayaan janno fanka iyo taariikhda jecel. Ka baxsan noqoshada qurxinta qaab dhismeedka, Milan waa saaxibtinimo saaxibtinimo sareyso xitaa wey guuleysatay a 2016 Abaalmarinta Helitaanka EU. Markaa Milan waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu wanaagsan ee lagu booqdo Yurub ee loogu talagay dadka safarka ah.
Hadaad dhaaftay 60-aad oo diyaar u ah nolol qurux badan, ka dib waxaad ku heli doontaa waqti aad u cajiib badan gudaha Milan. The cunnada ay Talyaani, ah naqshadaha cajiib ah reer Basilicas, meelo lagu daawado farshaxanka, iyo matxafyada ayaa kaa dhigi doona inaad dareento boqornimo. Marka Milano, xaqiiqdii waa inaad ku biirtaa fasalada karinta baastada maxaa yeelay waligeed lagama daaho inaad barato sida ugu fiican ee loo kariyo baastada si aad ugu raaxeysatid gurigaaga la dolce vita..
Genoa wuxuu u socdaa Milan oo uu raacayo Train
Rome in Milan ay tareenka
Bologna ilaa Milan by Train
Florence wuxuu u socdaa Milan by Train
3. Magaalooyinka ugu Fiican Yurub ee Booqanaya Kuwa Safarka Waaweyn: used, Belgium
Qaar ayaa leh Bruges waa magaalada ugu qadiimsanayd Yurub dhexdeeda. Wadooyinka Cobblestone, guryaha midabka leh, Farshaxanka Gotik, dhammaantood waxay ka dhigaan Bruges safar balaadhan oo yurub ah oo loogu talagay dadka safraya. Waxaa intaa dheer, waxaa jira kanaallo halkaas oo aad ku qaadan karto doon yar oo aad ku qancin karto Bruges adiga oo aan talaabo qaadin, waayo-aragnimo qofkastoo ka mid ah waa u mahadcelin karaa. laakiin, hadaad doorbideyso inaad magaalada ku soo aragtid cagta, walwal malaha, Barootiyuhu waa magaalo aad u isku xidhan. Sidaas, waa ku habboon tahay socdaalayaasha sare heer kasta oo jimicsi.
Waa inaad ugu yaraan u hibisaa 3-4 maalmo si aad uga gudubto 80 kanaallada magaalada oo ku nastaan ​​harada Minnewater. Waxqabad kale oo weyn oo ka socda Bruges waa suuqa qaar ka mid ah dukaamaysiga sharafta leh ee qoyska.
Saldhigga dhexe ee tareenka ee Bruges waa qiyaastii 10-20 daqiiqo’ iyagoo lugeynaya bartamaha magaalada, si aad ugu safri karto meelkasta oo Beljamka iyo Boqortooyada Midowday.
Brussels ilaa Bruges by Tareenka
Antwerp in daroogada by Tareenka
Brussels ilaa Vienna oo Tareen ah
U xaqiiji Bruges by Tareenka
Iyaga oo wata tareeno ka socda Paris, Basel, Zurich, iyo Munich, Magaalada Baden-Baden waa mid aad u sahlan dadka safarka ah. In kasta oo aysan ahayn magaalo weyn oo caam ah sida Berlin, waa sumadda nolosha wanaagsan. Jarmalka ayaa hoyga u ah 900 goobaha dalxiiska, laakiin meelaha lagu nasto ee Baden-Baden iyo dhamaan fasalada ayaa ka sareeyay dhammaantood.
Fasaxyada dalxiiska ee Baden-Baden ayaa ah xulashada fasaxa ugu fiican ee loogu talagalay safarka waaweyn ee Yurub. Xawaaraha xasilloonida, daaweynta macdanta iyo dhoobada dhoobada, jardiinooyin qurxoon sida Paradies, abuuro gabal cirka. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad jeceshahay inaad firfircoonaanta u joojiso ciidaha, markaa waxaa ku dhex jira koorsooyin golf iyo naadiyo isboorti oo gudaha ah Baden-Baden inaad booqato.
Safarrada waaweyn ee Yurub waxay ku heli karaan magaalooyinka badankood inay ku adag yihiin socdaalkooda, buuraha iyo wadooyinka ciriiriga ah dartood. Sidaas, aad ayey muhiim u tahay in la fahmo haddii magaalada aad ku riyootid ay ufiican tahay awoodahaaga jir ahaaneed. U safridda magaalada saxda ah ee saaxiibka la ah ee Yurub waa muhiim sidoo kale caymiska safarka. Korkeenna 7 Magaalooyinka ay booqdaan dadka safarka ah ee waaweyn waxay liis garanayaan magaalooyinka ugu badan ee Yurub looga heli karo waayeelka.
Berlin ilaa Baden-Baden oo Tareen ah
Munich ilaa Baden-Baden waxaa qoray Tareenka
Zurich ilaa Baden-Baden waxaa qoray Tareenka
Basel ilaa Baden-Baden waxaa qoray Tareenka
5. Magaalooyinka ugu Fiican Yurub ee Booqanaya Kuwa Safarka Waaweyn: Berlin, Germany
Madxafyada iyo astaamaha dhulka ee la xidhiidha WWII iyo dagaalkii qaboobaa, Ka dhiga Berlin meel aad u wanaagsan safarka dheer ee Yurub. Berlin waa mid fidsan iyo gaadiidka dadweynaha aad ayuu ufiican yahay, basaska iyo dhulka hoostiisa labadaba. Haddii aad ku sugan tahay heer jimicsi oo wanaagsan, Waxaad ku sahamin kartaa magaalada safar ku yaal Segway.
Xadiiqadaha cagaaran ee badan ee magaalada Berlin waxay kufiican yihiin safarada galabta iyo taraafikada, iyo goobaha farshaxanka waa ikhtiyaar aad u wanaagsan haddii aad doorbideyso xasilooni iyo dhaqdhaqaaq dhaqameed intii aad ka weeyn lahayd xarunta mashquulka ah.
Frankfurt ilaa Berlin by Train
Khadka Kobanheegan ilaa Berlin
Hanover ilaa Berlin by Train
Hamburg ilaa Berlin by Train
6. Amsterdam, Netherlands ayaa
Iyada oo leh kanaalka sawirrada leh, Amsterdam had iyo goor waa meel safarka weyn ee safrayaasha waaweyn ee Yurub. Amsterdam waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu fiican ee lagu booqdo Netherlands, Thanks to gariirkeeda nasashada iyo baaxadda leh. Amsterdam waa yar yar marka la barbar dhigo magaalooyinka kale ee Yurub, sidaa darteed uma baahnid inaad ordo oo aad ka walwasho inaad fiirisid.
Hadaad ka daasho magaalada mashquulka badan, madaxa banaanka magaalada si aad u ogaato moolalka caanka ama beeraha Tulip, hadaad safarto guga. Ama haddii aad ku sugan tahay qaab jireed oo wanaagsan, kireysiga bushkuleetiga iyo ku wadista baaskiilka magaalada qurxoon waa figrad naxdin leh.
Bremen in Amsterdam by Tareenka
Hannover to Amsterdam by Tareenka
Bielefeld ilaa Amsterdam by Train
Hamburg ilaa Amsterdam by Train
7. Magaalooyinka ugu Fiican Yurub ee Booqanaya Kuwa Safarka Waaweyn: Vienna, Austria
Dhismaha Muuqaalka, opera, iyo qalcadaha boqortooyadu waxay Vienna ka dhigaan safar safar cajiib ah oo loogu talagalay dadka safarka ah. Haddii aad gaadhay wakhtigaas bilaashka ah ee walwalka nolosha marka aad dib u fadhiisan karto oo aad ku raaxaysan karto miraha shaqada adag, ka dib u gudub Vienna. Waxaa intaa dheer, Vienna waa magaalada labaad ee ugu dadka badan qaarada Yurub ee loogu dalxiis tago dadka waaweyn ee dhaqdhaqaaqa xadidan.
Qaxwaha Austrian Austrian 'qolalka ku nool' keega mooska iyo buskudka Austrian schnitzel, dammaanad qaado inaad runtii yeelan doontaa khibrad aan la ilaawi karin oo aan la ilaawi karin. Qeybta dhaqanka ee safarka waxaad booqataa guriga opera ee xiisaha leh si aad uhesho. Ka dib oo dhan, Vienna waa halka ay Mozart iyo Schubert ka koobnaayeen goos gooskooda, magaalada muusigga iyo farshaxanka.
Qasriga Belvedere waa mid ka mid meelaha loo baahan yahay in Vienna laga arko, ku hareereysan jardiinooyin ubax iyo ilo, waa goob dib loo fariisto oo lagu raaxeysto.
Bartamaha magaalada waa cadaalad 5 daqiiqado ka fog xarunta tareenka. Sidaas, hadaad ka timid wadamada dariska ah, Ma jiraan wax ka fudud in loo safro Vienna.
Salzburg ilaa Vienna oo ay Tareen Tahay
Munich ilaa Vienna waxaa tababaraya Train
Graz ilaa Vienna oo Tareen ah
Prague in Vienna by Tareenka
halkan at Save A tareenka, waxaan ku faraxsanaan doonnaa inaan kaa caawino helitaanka heshiisyada tikidhada tareenka ee ugu jaban iyo jidadka safarka ee mid ka mid ah magaalooyinka liiska ku yaal.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “7 Magaalooyinka ugu Fiican Yurub ee Booqanaya Kuwa Safarka Waaweyn” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit leh link in post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-visit-senior-travelers%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga wadada tareenka degtey our.
In link soo socda, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- link this waa wadooyinka Ingiriisi bogagga degtey, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, waxaadna ku bedeli kartaa tr ilaa pl ama nl iyo luqado badan oo aad doorato.
6 Talooyin Savvy ah oo aad ku qorsheyneyso koox safar ah oo ku saabsan miisaaniyadda
Waa Maxay Top The 8 Dheriwadaag In Italy
Sida loo helo Si Venice By Tareen Waayo, Easter